ဘာလို့ ဒေါင်းမရတာလဲ.. — MYSTERY ZILLION
April 2009 edited April 2009 in Project
ornagai site ကို၀င်လို့ရတယ်...ဒေါင်းမယ်လဲလုပ်ရော...error page not found ဆိုပြီးတက်လာတယ်.. mpt, bagan error မဟုတ်ဘူး...ကွန်မန့်ချန်ထားခဲ့မလားစိတ်ကူးပြန်တော့လဲ..ဒီလိုပဲ...ကိုစေတန်တို့ပေးလို့ရပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ပေးလို့မရတာလဲသိဘူး.:14::14:ပြီးတော့ ornagi ကိုဒေါင်းချင်လို့ရှိရင် ဘယ်ကဒေါင်းဆိုတာကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ပေးထားရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်... e.g. Click here to download ဆိုပြီးတော့ပေါ့:77::77::D
မှတ်ချက်။.....။ ပေးထားတဲ့လင့်ခ်ကို သွားမကလစ်နဲ့နော်...http://1 လို့ရိုက်ထည့်ထားတာ:D လင်ခ်လေးပေါ်အောင်လို့...:D:P:)
http://www.ornagai.com/site/mobile မှာရှာတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ။
web page ရဲ့ အလယ်နားမှာ icon အကြီးကြီးနဲ့ကို Download လို့ရှိနေတာပါ။
ခင်ဗျားပြောတာလည်း ဟုတ်ပါရဲ့ Site ကိုလာပြီး Download ဆိုတာကြီးကို တကူးတကရှာနေရရင် မဖြစ်ချေဘူး။
Web page ရဲ့ ထိပ်ဆုံးကိုရွှေ့လိုက်ရင် ကောင်းမယ်နော်။
Comment ကိစ္စကတော့ Word Press မှာ Moderation ကို on ထားတယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Comment တွေ pending ဖြစ်နေပုံပါပဲ။
ဦးဇင်းစေတန် ဆီကိုတော့ email တွေဝင်နေမှာပါ ဒါပေမယ့် သူက အခု ငြိမ်းချမ်းရာ နယ်မြေမှာဆိုတော့
(အဲ....တရားအရိပ် ကိုပြောတာနော် တလွဲထင်နေမှာစိုးလို့) email တွေကိုလည်း သိပုံမရဘူး။
ကျွန်တော် comment တွေကို approve လုပ်ထားပါပြီ။
ဘာလို့ဒေါင်းဖို့ဟာကို www.ornagai.com/site/mobile မှာထားတာလဲ...လူတွေက ဒီဆော့ဖ်၀ဲလ်ဒီမှာဒေါင်းလို့ရတယ်ဆို အများအားဖြင့် main site (http://www.ornagai.com) ကိုပဲပေးတာများမယ်ထင်တယ်..အဲဒီအခါကျ ဒေါင်းဖို့ကခက်သွားရော...
ဖြစ်နိုင်ရင် main page မှာပဲတစ်နေရာထားပေးပြီး ဒေါင်းဖို့ပေးထားရင် ပိုလူသုံးများမယ်ထင်တယ်...:)
တွေ့ပါပြီခင်ဗျာ... ကွန်မန့်တော့ပေးလို့ရပါပြီ..ဒါပေမယ့် comment ပေးဖို့ button ကိုတော်တော်ရှာယူရတယ်..အစ်ကိုတို့ရယ်...ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့များ..အပြာနုပေါ်မှာ အဖြူရောင်နဲ့စာရေးရတာလဲဗျာ..:( အဲဒါလေးတွေ ပြင်ပေးပါနော်...
ကျွန်တော်မေးတာကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..:)
Wordpress ရဲ့ theme ကတော့ ဦးဇင်း စေတန် နဲ့ တိုင်ပင်ရဦးမယ်။ အကြံပြုတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ornagai ရဲ့ home page မှာ တိုက်ရိုက် link တင်ဖို့ကိုတော့ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် မပြောတတ်ဘူး။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမြင်ကတော့ Download ဆိုတဲ့ link လေးထားပေးလိုက်ပြီး
အဲဒါကို click လုပ်လိုက်ရင် latest download တွေချည်း စုထားတဲ့ page မျိုးပေးထားရင် သင့်လျှော်မယ်ထင်ပါတယ်။
Home page မှာ အများကြီး မရှိစေလိုတာတော့ အမှန်ပါ။
(ကိုယ်လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပေမယ့်) ornagai Home page လေးကို အခုလို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း
minimalist design လေး ကြိုက်ပါတယ်။ လိုရင်းက စာလုံးရှာဖို့ပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဟုတ်ဘူးလေ..ကျွန်တော်ပြောတာက ဒေါင်းဖို့ပဲလာတဲ့လူဆိုရင် ဟိုသွားဒီသွားနဲ့ကွန်နှေးတော့ ကြန့်ကြာနိုင်တယ်လေ..ဒါကြောင့် home page မှာ ဟိုအပေါ်က ပုံလိုမျိုးလေးထည့်ပေးထားရင် ပိုအဆင်ပြေစေတာပေါ့...:) အကြံပေးကြည့်တာပါ..ကျွန်တော်ခံစားကြည့်ပြီးတော့လေ....:D